'वाम गठबन्धन पछि कांग्रेस हताश' - BBC News नेपाली
'वाम गठबन्धन पछि कांग्रेस हताश'
चुनावी अभियानका क्रममा गृहजिल्ला झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाम गठबन्धन पछि नेपाली कांग्रेस हताश बनेको बताएका छन्।
उनले नेपाली कांग्रेसले साम्यवाद भनेको के बुझेको छ? भन्ने प्रश्न गर्दै, उनकै शब्दमा, कुतर्कहरुका पछाडि आफु नकुद्ने पनि बताए। अध्यक्ष ओलीसँग हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाली कांग्रेसको हतासा जुन छ अहिले त्यो अराजनीतिक हो। नेपाली कांग्रेसले साम्यवाद भनेको के बुझेको छ? कुतर्कहरुका पछाडि हामीलाई कुद्नु छैन। 'साम्य' भनेको बराबर अनि 'वाद'। समान अधिकार, समान अवसर, समान सुरक्षा, समान सम्मानको अवस्था समाजमा हुनुपर्छ। सबैको उन्नति, प्रगति हुनुपर्छ। यो भन्दा नराम्रो प्रणाली भयो? साम्यवादी प्रणाली अथवा कम्युनिष्ट अन्तर्गतको व्यवस्थामा चीनले गरेको उन्नति, प्रगति र त्यहाँका जनताको जीवनस्तरका बारेमा के भन्छ कांग्रेस?
माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष जसलाई उसले 'जनयुद्ध' भन्छ। पहिला आलोचना गर्नु भयो, अहिले आएर एमालेले त्यो 'जनयुद्ध'लाई स्वीकार गरेको हो? किनभने तपाईंहरुको घोषणापत्रमा त लेखेको छ ?
बिग्रियो कहाँ भन्दा यहाँबाट कुदेर दिल्ली पुग्ने अनि 'हजुर हामीलाई समान व्यवहार भएन' भनेर जाने भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको हो। चीनसंगको सम्बन्ध पनि बिगार्न सकिँदैन। चीन हाम्रो असल मित्र हो । हाम्रो सम्बन्ध समनिकटताको हो
मैले समनिकटता कायम हुनुपर्छ भनेको छु। अत्यन्त समस्यारहित सम्बन्ध हुनुपर्छ पारस्परिक लाभ तथा हितको सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। एक अर्काका सार्वभौमसत्तालाई, स्वाधीनतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। एउटाले आफ्नो स्वाभिमानको कुरा गर्दा राम्रो लाग्ने तर अर्काको स्वाभिमानको कुरा नराम्रो लाग्ने हुनुहुँदैन। भारतसंगको हाम्रो सम्बन्ध कसैले बिगार्नै सक्दैन। यहाँ केही स्वार्थी तत्व छन् जसले आफ्नो स्वार्थका लागि भारतसंगको सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छन् । म प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी लागिरहेको थियो सम्बन्ध बिगारिदिएर। मधेश बन्द थियो। ती सबै समस्या समाधान भए नाकाबन्दी खुलाइयो। म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएँ अत्यन्त आत्मीय व्यवहार भयो। राष्ट्र हितमा नयाँ नयाँ विभिन्न समझदारीहरु भए। असमझदारी हटे। समझदारी माथिल्लो स्तरमा उठ्यो। बिग्रियो कहाँ भन्दा यहाँबाट कुदेर दिल्ली पुग्ने अनि 'हजुर हामीलाई समान व्यवहार भएन' भनेर जाने भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको हो। चीनसंगको सम्बन्ध पनि बिगार्न सकिँदैन। चीन हाम्रो असल मित्र हो। हाम्रो सम्बन्ध समनिकटताको हो।